Ugu yaraan sideed qof oo ku dhimatay diyaarad milatari oo ku burburtay Afghanistan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan sideed qof oo ku dhimatay diyaarad milatari oo ku burburtay Afghanistan
October 9, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Diyaarada qumaatiga u kacda oo milatari. [Sawirka: Reuters]
Kabul-(Puntland Mirror) Diyaarada qumaatiga u kacda oo milatari ayaa ku burburtay gobolka waqooyiga Afghanistan kuyaala ee Baghlan, waxaana ku dhimatay sideed qof oo saarnaa, sida uu sheegay sarkaal.
Dawlat Waziri, oo ah afhayeenka wasaarada difaaca Afghanistan, ayaa sheegay maanta oo Axad ah in shan qof oo rakaab ahaa iyo saddex askari ay ku dhinteen.
Burburka ayaa ka dhacay degmada Dand Ghori iyadoo diyaarada ay agab gaarsiinaysay saldhig milatari. Waziri ayaa sheegay in diyaarada ay ku dhacday dhibaato farsamo.
Bayaan ay soo saareen, kooxda Talibaan ayaa sheegatay masuuliyada in ay soo rideen diyaarada, iyagoo sheegay in dagaalyahanada kooxda ay dhulka soo dhigeen.
Dagaalyahanada Talibaan ayaa kordhiyay weeraradooda ka dhanka ah ciidamada amaanka Afghanistan ee gobolka waqooyiga Baghlan iyo dariskiisa gobolka Kunduz.